Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Trump International Hotel na Washington, DC rere
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Trump International Hotel na Washington, DC rere
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Trump International Hotel na Washington, DC rere.
N'agbanyeghị ụgha Trump na-ekwu na ọ wetara ihe dị ka nde $150 n'oge ọ nọ n'ọchịchị, akwụkwọ gọọmentị na-egosi na ihe onwunwe ahụ tụfuru onye bụbu onye isi ala karịa $70 nde.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Trump International dị na ụlọ akụkọ ihe mere eme narị afọ dị na ogbe ndịda Washington.
Ụlọ akụkọ ihe mere eme bụ nke gọọmentị US mana enwere ike ịgbazite ya ruo otu narị afọ.
Ụlọ ọrụ ntinye ego nke dabeere na Miami CGI Merchant Group na-ezube iwepụ aha Trump n'ụlọ ahụ wee jiri akara Hilton's Waldorf Astoria.
Ụlọ ọrụ ntinye ego nke Miami dabeere na CGI Merchant Group azụrụla ikike nke Ugwu okpu International Trump dị na ụlọ akụkọ ihe mere eme narị afọ na ogbe ndịda Washington, DC
Ugwu okpu International Trump Ọ dị obere ihe mgbochi site na White House ma nwee ụlọ akụkọ ihe mere eme bụ nke gọọmentị US mana enwere ike ịgbazite ya ihe ruru 100 afọ.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-ewu ewu trump ndị na-akwado kwuru na-eweta ọtụtụ mfu karịa uru na-adịbeghị anya.
N'agbanyeghị trumpNkwupụta ụgha na ụlọ oriri na ọṅụṅụ wetara ihe dị ka nde $150 n'oge ọ nọ n'ọchịchị, akwụkwọ gọọmentị na-egosi na ihe onwunwe ahụ furu efu onye isi oche mbụ karịa $ 70 nde.
Otu kọmitii na-ahụ maka ogbako nke Congress chọpụtakwara na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ nwetara ihe dị ka nde $ 3.7 na ịkwụ ụgwọ sitere n'aka gọọmentị mba ọzọ, nke a pụrụ ile anya dị ka esemokwu nke mmasị.
N'agbanyeghị nke ahụ, ikike nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-ewetazi $375 nde maka ụlọ ọrụ onye isi ala US Donald Trump.
Onye zụrụ ahịa bụ ụlọ ọrụ itinye ego na Miami nke CGI Merchant Group, nke na-ezube iwepu aha Trump n'ụlọ ahụ wee mee ka otu Hilton's Waldorf Astoria jikwaa ya na akara ya.